« prev 1 5 6 7 next »
Tirada dadkii ku dhintay qaraxii maanta ee Wadada Maka Al-Mukarama oo korortay
Sagal Radio Services • News Report • March 28, 2019
Ku dhowaad labaatan ruux ayaa ku geeriyootay qarax xooggan oo maanta ka dhacay Wadada Maka Al-Mukarama, gaar ahaan Labo maqaayad oo ku dhow Hotelka Wehliye.
Galmudug oo si kulul uga hadashay hadal ka soo yeeray Madaxweyne Farmaajo (Akhriso)
Maamulka Galmudug ayaa si kulul uga hadashay hadal shalay ka soo yeeray Madaxweyne Farmaajo, kaasoo in doorashada Galmudug ay dhaceyso sanadkan dhexdiisa.
Guddoomiye Mursal oo ugu baaqay Xukuumadda in si degdeg ah u soo gudbiso sharciga doorashooyinka
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa ugu baaqay Xukuumadda inay iska xil saarto ka wada xaajoodka qodobada dastuurka faraya, si go’aan looga gaaro.
Waalidiin ku banaanbaxay Madaxtooyada Soomaaliya horteeda
Sagal Radio Services • News Report • March 30, 2019
Qaar kamid ah Hooyooyinka dhalay Carruurta ay ka geeriyoodayn Ciidamada Booliiska Soomaaliya kuwaas oo loo yaqaano, Carruurta agoonta Booliiska, ayaa maanta banaanbax ka dhigay Madaxtooyada Soomaaliya horteeda.
Madaxweynaha Somaliland oo xilalkii ka qaaday wasiiro musuqmaasuq lagu eedeeyay
Madaxweynaha Maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa wareegto uu soo saaray waxa uu xilkii ugaga qaaday Wasiirada Gaashandhigga,Warfaafinta,wasiir ku xigeenka Warfaafinta iyo weliba Agaasimayaal isagoo xilalkoodii mas’uuliyiin kale u magacaabay.
Sagal Radio Services • Audio/News Report • March 30, 2019
Ciidamada Ammaanka oo gacanta ku dhigay Nin hubeysan oo Askari ku dilay Dayniile
Sagal Radio Services • News Report • March 31, 2019
Ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay nin hubeysan, kaasoo dil u geystay Askari ka tirsan Ciidanka Milatariga ee ka howlgala degmada Dayniile.
Sagal Radio Services • Audio/News Report • March 31, 2019
Agaasimaha Xafiiska Wasiirka A. Dibadda oo xilka looga qaaday qoraal uu ku taageeray xiriir lala yeesho Israa’iil
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa shaqada ka eryay Agaasimihii Xafiiskiisa C/llaahi Axmed Dool, kaasoo qoraal uu soo geliyay bartiisa Twitter-ka ku taageeray xiriir Soomaaliya la yeelato Israa’iil.